Ụbọchị My Pet » Gịnị Women Chọrọ na ha zuru okè Man?
emelitere ikpeazụ: Apr. 05 2020 | 2 min agụ
Women achọ mgbe nile na onye ahụ na ka ndụ ha àgwà ụfọdụ. Ndepụta bụghị mara ogologo, ma mgbe ọ na-aghọ siri ike ịhụ ndị a niile àgwà a otu nwoke. Ya mere, ma ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ ndị àgwà tụlere n'okpuru, gị Ohere nke wooing inyom na-eme ha obi ụtọ ga-adị ukwuu karịa ndị ikom na-enweghị àgwà ndị ahụ.
Isi ọma na-enwe ezi uche nke mgbakwasa
Women dị nnọọ asị ndị na-esi isi ọjọọ. Ya mere, Echefukwala kpọpụ a deodorant mgbe aga na nwaanyị. Jide n'aka na ị na-eji na-esi isi deodorant ọma na ị. The isi a senti ma ọ bụ deodorant emepụta mgbe na-abịa na kọntaktị na gị ahu bụ Nchikota ya esi ísì gị na ahu isi. Ya mere, a deodorant ma ọ bụ senti na-esi isi na na na enyi gị nwere ike ọ gaghị eme ka ị na-esi ísì na ezi. Ya mere, na-aga n'ihi a gbalịrị na-anwale nhọrọ; ka amamihe-adị mgbe na-eme oke nke deodorant.
Women n'anya na-na ndị ikom na-enwe ezi uche nke mgbakwasa. N'ihi na ọtụtụ ndị inyom, emezighituri yi uwe ndị ikom nwere nnukwu turnoffs. Iji mmasị ndị inyom ndị ikom kwesịrị na-anọ ruo-ụbọchị na ejiji na-anọgide na-eme mgbanwe n'ụzọ ha na-eji ejiji. Otú ọ dị, a nwoke kwesịrị na-eyi uwe na anya ọma na ya, ọ bụghị ihe mere nke na-adịghị otú ahụ ya ụdị.
Omenala nwere ike ịbụ sexy kwa; otú, ma ọ bụrụ na ị na-adịghị nkọ na yi trendy uwe, nwalee ochie, ma ike na-aga na-ezighị ezi n'ịgwa dị ka ịkụ gọlfụ na denim (ịhọrọ agba amamihe, acha anụnụ anụnụ denim mgbe arụ ọrụ kasị mma).
Nwee uzo, ma cheta ukwuu ime ihe n'eziokwu pụrụ ịbụ na-emerụ
Women mgbe niile chọrọ ịbụ onye na-akụkụ dị mkpa nke ya nwoke ndụ; ọ pụrụ anabataghị ụgha banyere ihe ndị dị mkpa. N'ihi ya, a mmadụ ga-agbalị mgbe nile ịnọgide na-enwe a nnọọ uzo mmekọrịta ya na nwunye ya ma ọ bụ nwa agbọghọ enyi. Men ekwesịghị ichefu ịkọrọ niile ahụmahụ ndị ha nwere ma ọ bụ na-enwe ná ndụ, mma ma ọ bụ ihe ọjọọ na nwaanyị ahụ ná ndụ ha.
Otú ọ dị, e nwere ihe a ighikota ke akụkọ; mgbe ị ga-uzo nwaanyị na ị nọ na a mmekọrịta, ị gaghị ewetali na-brutally n'eziokwu. Mụta ito ya ọbụna mgbe ọ na-adịghị na-achọ ndị kasị mma; mgbe na-akpọ ya buru ibu ọbụna ma ọ bụrụ na ọ nweela 10 pound; zere-akpọ ya òkù a ọjọọ na-esi nri ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ n'eziokwu. Soro ndị a aro na ị ga-enwe obi ụtọ a ndụ n'ezie.
Women dị ka ndị n'anya ụmụ ọhụrụ na mgbe ihere pụọ n'ebe n'inyere ndị agadi aka. Yabụ, inyom na-achọ nwoke na ndụ ha na-enwe ọmịiko. Gbalịa ịbụ nwoke na-esetịpụrụ ezi ihe nlereanya, onye na-enwe mmasị n'ebe ndị mmadụ nọ na ya, onye na-ekele okenye.
Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ ime mmeghe nke ịbụ ituiro na ọjọọ nanị iji gosi na ha bụ ndị siri ike. N'ihi na ndị inyom bụrụ ike n'aka, ịbụ n'anya ma na ọmịiko na inwe ikike iji chebe.
Ị nwere àgwà ndị a? Ọ bụrụ na ọ bụghị, na-agbalị ịzụlite ha; ị ga-adịghị mkpa na-etinye na mgbalị dị ukwuu dị ka na-emepe emepe àgwà ndị dị nnọọ mfe karịa ewu a zuru okè ma ọ bụ na-amụta na-agba egwú nzọụkwụ.